प्रियंकाले आधिरातमा किन गरिन् रणवीर लाई फोन ? यस्तो छ कारण| Nepal Pati
प्रियंकाले आधिरातमा किन गरिन् रणवीरलाई फोन ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । बलिवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आजकल अंग्रेजी फिल्ममा व्यस्त छिन् । उनका फ्यानहरु उनलाई फेरि हिन्दी फिल्मा देख्न चाहान्छन् । हालै, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा उनले रणावीर सिंहलाई एक भिडियो कल गरिन् ।
यसैबीच उनीहरूले महिला दिवसकाबारेमा कुराकानी गरे, साथै प्रियंकाले हिन्दी चलचित्रमा आफ्नो भविष्यको योजनाबारे बताएकी छिन् ।
प्रियंका चोपडाले आधि रातकारणवीर सिंहलाई भिडियो कल गरेर आश्चर्यचकित पारिदिईन् । रणवीर त्यसवेला यात्रा गरिरहेका थिए । उनी र आफ्नो आगामी फिल्म गली बाँयाको शूटिङका लागि जाँदै थिए । उनीहरु दुबैले केही बेर कुराकानी गरे ।
कुराकानीका क्रममा प्रियंकाले रणवीरसँग महिला दिवस मनाउने बारेमा सोधेकी थिइन् । । रणवीरले भने, थाहा छैन किन हरेक कुरालाई एक दिन मनाउने गरिन्छ ? बास्तवामा यस्तो हरेक दिन हुनुपर्छ । प्रियंकाले रणवीरलाई महिला दिवसको दिन के गर्यौ भनेर प्रश्नगर्दा रणवीरले भने, ‘मैले स्कर्ट लगाएं ।’
रणवीरले भने, उनको आउन लागेको फिल्म गली वायाँका पुरै टिमले त्यस दिन स्कर्ट लगाएर महिला दिवस मनाएका थिए । यसपछि, रणवीरले प्रियंकालाई चाँडै भारत आउन भने साथै हिन्दी चलचित्रमा काम गर्न आग्रह गरे । प्रियंकाले प्रतिक्रियामा भनिन्, यसबारेमा कुराकानी भइरहेको छ, यनी छिट्टै नै भारत आएर
हिन्दी फिल्मा काम गरेको देख्न पाइने छ । हाल उनी न्यूयर्कमा क्वॉन्टिको-३ को शूटिंग व्यस्त छिन् । उक्त शो समाप्त भएपछि उनी भारत फर्किने छिन् ।